Labada nooc ee lacagta waaweyn waxay ka ganacsadaan xirmooyin cidhiidhi ah iyada oo suuq-geynta suuqgeynta saamiyada ee DJIA | FXCC Blog
Jul 23 • Qiimaha Ganacsi ee Forex, Wicitaan Waji hore • 637 Views Comments Off Isweydaarsiga laba-geesoodka lacagta waa weyn ee xaddiga ganacsiyada suuq geynta DJIA
Fursadaha-tallaabada qiimaha ganacsatada maalinlaha ah ee ku takhasusay ganacsiga laba-labolaha ah keligood ayaa yaraa intii lagu jiray kal-fadhiyada ganacsiga isniinta iyadoo majarayaasha ay badanaa ka ganacsan jireen dhinacyo cidhiidhi ah inta lagu gudajiro kalfadhiga maalinta. 20: 00pm waqtiga UK EUR / USD ayaa hoos u dhacay -0.08%, USD / CHF kor 0.02%, AUD / USD hoos -0.09% iyo USD / JPY ilaa 0.16%. Isniinta waxay ahayd maalin aad u xasilloon dhacdooyinka kalandarka dhaqaalaha iyo siidaynta xogta iyo dhaqaala darridaan shaki la'aan waxaa laga dheehan karaa la'aanta dhaqdhaqaaqa tallaabada qiimaha guud ee guddiga. Tilmaanta doolarka ayaa ka sariftay 0.14% 97.28.
Sterling wuxuu ahaa lacagta ugu horreysa ee la kulma dhaqdhaqaaqa ka baxsan xadka adag iyo kuwa kale, maxaa yeelay soo-saarka siyaasadeed ee Boqortooyada Midowday wuxuu sababay in lacagtu isu beddesho oo ay ka garaacdo dhowr ka mid ah asaxaabteeda. Warar soo baxayay ayaa sheegaya in jagada gudoomiye kuxigeen, Philip Hammond, uu is casilayo arbacada ka hor inta aan si aan qarsooneyn shaqada looga ceyrin ra'iisul wasaaraha cusub Boris Johnson, taasoo sii kordhineysa deganaansho la’aanta iyo shakiga ku saabsan lacagta Ingiriiska. Subaxnimadii Isniinta ayaa wasiir kale iscasilay ka hor intaan la riixin. Isaga oo ka hadlaya sida uu ugu kalsoon yahay in Johnson uu noqdo raiisel wasaaraha waxa uu isku dayay in uu diyaariyo codka kalsoonida ee ra'iisal wasaaraha cusub ee la qaban doono Arbacada, ka hor intaanu shaqada ku jiri doonin wax ka yar 24hrs. Johnson ayaa uqalma in la shaaciyo madaama uu yahay raiisul wasaaraha UK ee 11: 00am salaasada ka dib markii codbixinta la xiray fiidnimadii Talaadada, sterling ayaa laga yaabaa inuu jawaab ka bixiyo natiijada natiijada la baahiyay.
Xisaabinta xisbiga Tory ee dowlad ahaan waxay sidoo kale u muuqataa inay si xasilooni darro ah u degsan tahay, iyadoo xubin baarlamaanka ka mid ah uu is casilayo sababtoo ah waxaa lagu soo oogayaa dacwado dambi iyo luminta kursiga sababtoo ah doorashada soo socota aqlabiyadda ayaa laga yaabaa in loo yareeyo hal. xitaa iyadoo la kaashanayo Xisbiga Irish DUP Party. GBP / USD waa lammaanaha lacagta ugu nugul arrimaha siyaasadeed ee Boqortooyada Midowday, ka dib markii loo xilsaaro xayeysiin adag oo maalinle ah 20: 20pm lammaanaha ayaa hoos uga dhacay -0.16% 1.248. EUR / GBP waxay ku ganacsaneysay 0.25% iyadoo sicirka loogu hanjabay inuu jebin karo xNUMX gacanta.
Tilmaanta ugu weyn ee caddaaladda Mareykanka, DJIA, ayaa xirmay maalinta u dhow guriga iyadoo ay ku degdegeyso inay maalgashi ku sameyso keydka buluugga ah ee Mareykanka maaddaama ciyaar difaac ah ay u muuqato inay daallan tahay. SPX waxay ku ganacsaneysay 0.21% iyadoo NASDAQ ay ka ganacsatay 0.79% sababtuna tahay dakhliga ku soo gala tig-tiga tikniyoolajiyadaha soo socda kahor saadaalinta. 20: 50pm waqtiga UK ee saliida WTI ayaa hoos u dhigtay 0.79% at $ 56.17, xiisadaha ka jira Strait of Hormuz, iyadoo ay ugu wacan tahay markab shidaalka ka shaqeeya UK oo ay dhowaan gacanta ku dhigeen masuuliyiinta Iiraan, saameyn ku yeeshay qiimaha saliida adduunka. Iyada oo xiisadaha ay qaboobeen inta lagu jiray maalinta WTI waxay dhiibtay qayb aad u badan oo ka mid ah guulaha la diiwaangaliyay horaantii maalinta.
Akhbaarta taariikheed ee Talaadada waxay ka bilaabmaysaa xogtii ugu dambeysay ee CBI (xiriirka warshadaha Ingiriiska) ee lagu daabacay 11.00am UK waqtiga. Saadaasha Reuters ayaa tilmaamaysa in isbeddelada amarada aqriska ee bisha Luulyo ay sii ahaan doonaan -15 iyadoo mitirka ganacsiga ganacsiga uu soo galayo -20 oo ka dhacaya -13 bisha Juun. Tirooyinka noocan ah ee diiwaangashan ee hooseeya, ee ka imanaya hay'ad iskaashato ganacsi ah oo UK ah ayaa su'aal ka keeni doonta macluumaadka ONS ee dhowaan soo baxay kaas oo soo jeediyay in iibka tafaariiqda iyo GDP ay si aad ah u fiicnaadeen muddadii bisha Juun. Akhrinta kalsoonida macaamiisha ee Luulyo ee u dambeysay ee Eurozone waxaa la saadaalinayaa inay sii ahaato mid aan is beddelin bishii -7.2.
Xogta guryuhu waxay ka kooban tahay wararka taariikhda dhaqaale ee ugu waaweyn ee loo daabacay Mareykanka Talaadada. Tilmaanta sicirka guryaha ee bisha May ayaa la saadaalinayaa inay muujineyso koror ah oo ah 0.3%, iyadoo iibinta guryaha ee hadda jirta la rajeynayo inay muujiso hoos u dhac-–0.1% bisha Juun ka dib markay sare u kacday 2.5% bishii May. Fiidnimadii salaasada ayaa diiradda la saari doonaa New Zealand maadaama dhoofinta ugu dambeysay, dhoofinta iyo xogta dheelitirka ganacsiga la daabacay. Isku-dheelitirka ganacsiga ee bisha Juun ayaa la saadaalinayaa inuu hoos ugu dhici doono $ 100m bisha Juun laga bilaabo $ 264m bisha May. Is-rasaaseynta noocan oo kale ah waxay saameyn ku yeelan kartaa kalsoonida dollarka kiwi oo la kulmay kor u kac intii lagu jiray kalfadhiyada ganacsiga Isniinta, 21: 22pm NZD / USD waxay ku ganacsaneysaa 0.10% iyo NZD / JPY kor u kacday 0.20%.
« Maalin xasilan oo ku saabsan taariikhda wararka taariikhda dhaqaalaha ayaa diiradda saari doonta GBP iyadoo Tories ay dhameystirtay codkooda codeeynta hogaaminta Sterling ayaa wajahaysa fiirsasho iyada oo ra'iisul wasaaraha cusub ee UK lagu dhawaaqay yen hoos u dhac iyadoo BOJ ay tilmaamtay inay sii yaraaneyso »